नाट्टाको अध्यक्षमा कांग्रेस निकट गुरागाईं विजयी स्पेसखबर
नाट्टा चुनाव : प्रजातन्त्रवादी गुरागाईं समूहको पल्लाभारी नाट्टामा रहेर लामो समय काम गरेका गुरागाईंसहितको टिम प्रतिस्पर्धी बामपन्थी समूहभन्दा बलियो देखिएको छ।
शैलुङमा हिउँको मज्जा [फोटो फिचर] दोलखाको पर्यटकीय स्थल शैलुङमा शनिबार हिउँ परेपछि हिउँ खेल्नेहरुको भीड लाग्यो। शैलुङ डाँडा दोलखाको मात्र नभई नेपालकै रमणीय पर्यटकीय स्थलको रूपमा परिचित छ।
यस्ताे पाराले कसरी सफल होला भ्रमण वर्ष? सिद्धान्त विपरित भ्याटमा गरेको संशोधन फिर्ता नलिए होटेल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
सगरमाथाको चुचुरोबाट भ्रमण वर्षको सन्देश विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाबाट ‘नेपाल भ्रमण वर्ष-२०२०’ को सन्देश प्रवाह गरिने भएको छ । नेपालको आरोहण इतिहासमै पहिलो पटक नेपाल, भारत र चीनका तीन महिला आरोहीले भ्रमण वर्षको सन्देशसहित ...
आरोहणका लागि जुगल हिमाल खुला राजधानीबाट नजिकको जुगल हिमाल आरोहण पहिलोपटक खुला गरिएको छ ।
नेपालकै पहिलो ‘स्मार्ट भिलेज’ घलेगाउँ सार्क राष्ट्रकैै नमूना गाउँको रूपमा परिचित लमजुङको घलेगाउँ नेपालको पहिलो ‘स्मार्ट भिलेज’ बनेको छ।
‘पिक्निक स्पट’ बन्दै सुर्खेतको बुलबुले ताल सुर्खेतका साथै छिमेकी बाँके, कैलाली, बर्दिया, दाङ जिल्लाबाट समेत पिक्निक खान आउनेको लर्को लाग्छ। बुलबुलेमा पिक्निकका साथै डुंगा शयरले पनि पर्यटकको मन तान्दै आएको छ।
बसन्तपुरमा पर्यटकको लस्कर, एकै दिन १३ लाख आम्दानी सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण वसन्तपुरमा पर्यटकको संख्या बढेपछि एकै दिन करीब रु १३ लाख आम्दानी भएको छ।
रारामा पर्यटकको चाप बढ्दो कर्णाली प्रदेशको ठूलो ताल रारामा यस याममा रारा जानेको संख्यामा वृद्धि भएको छ। दशैँ र तिहारको बीचमा बिदा हुने भएकाले आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढेको हो।
रारा पर्यटन वर्ष-२०७५ के पाँच लाख पर्यटक रारा पुग्लान्? मौसमका हिसाबले पनि बैशाखदेखि असारसम्म रारा जान उपयुक्त समय हो। यो तीन महिनाको अवधिमा कति पर्यटक रारा घुम्नकै लागि कुन क्षेत्रबाट आएका छन् भन्ने कुनै तथ्यांक सरकारले राख्न सकेको ...
राज्यबाट उपेक्षित पर्यटन क्षेत्र हरेक मन्त्रीले दुई वाक्य कण्ठस्थ गरेर आउने गरेका छन्–यस क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ। तर, त्याे कसरी गर्नुपर्छ भन्ने नबुुझी मन्त्री बाहिरिन्छन्।